Wax Ka Qabashada Garsoorka
4.1 Haddii mishiinku uu ku jiro bacalka bilawga qabow, fadlan u sii wad 5 daqiiqado la'aantiis; haddii mashiinku uu ku saleysanyahay aasaas diirran, fadlan qaado ka dib marka cadaadiska shidaalka la dhiso; fadlan si deg deg ah u dardar geli oo gadaal ka dib heerkulku wuxuu kor u kacay illaa 60 ℃ .
4.2 Fadlan sii wad 50 saacadood gudahood jabinta ama socota haddii ay tahay mid cusub mishiin ama mishiin kaddib marka dib loo hagaajiyo.
4.3 Xawaaraha sare, cadaadiska saliiddu waa inuu ku jiraa 0.25Mpa iyo 0.6Mpa; heerkulka biyaha waa in uu ahaadaa70 ℃ iyo 97 ℃ .
4.4 Fadlan marnaba ha ku dhaafin mashiinka mishiinka in ka badan 5 daqiiqo iyo 10 daqiiqadaha xawaaraha mimaanka ah, waxay gaabineysaa noolasha ama xitaa dhaawac mashiinka.
4.5 Ka dib markaad geshato qalabka jaban, fadlan u jeed qalabkaaga oo ay ku jiraan nalalka, qalabka korontada, mishiinnada, kombiyuutarada ama wax kasta aaladaha korontada ku shaqeeya ee tallaabo tallaabo ah; haddii la isticmaalo gawaarida saddexda-wajeer ah ujeedooyinka wajiga hal mar, fadlan u samee isku dheelitir saddexda weji difaac mishiinka iyo bedelka.
qalabka korontada koronto-dhaliyaha dhalashada
Hore : sida loo joojiyo garsoorka si sax ah
Xiga : Genset Battery Removal and Fitting